Taariikhda My Butros » 5 Waxyaabaha waxaad ku baran kartaa Dating From 50 Hooska Grey
Ever maqlay of Konton hooska Grey? In kasta oo dhammaan mataalada ku leedahay in la sameeyo rabitaanka galmada ee aadanaha iyo habab u gaar ah oo qariban inuu fuliyo, run ahaantii waxaa jira macnaha qoto dheer. In uu noqon karaa suurto gal? Dhab ahaantii, haa. Buugani wuxuu u muujinaya rabitaan, jiidashada, iyo jacaylka iyada oo loo marayo cilmi nafsiga aadanaha. Dhab ahaantii, waxaa dhab ahaan loo isticmaali karaa sida bible shukaansi ah. Xiiso badan? Akhri si aad u ogaato siyaabaha kala duwan, taas oo Konton hooska Grey ku bari kartaa oo ku saabsan shukaansiga iyo xiriirka.
Dulucda sheekada #1: Attention-tashi
Christian, lab dabeecaddiisa ugu weyn, doonayo Anastasia, halyeeyad ah. Waxa uu ka dhigaa ujeedadiisa aad u cad. Isaga oo fiiro iyo galmada tamarta ma waanay marka haweenka kale qurux galaan sawirka. Waxa uu diirada kaliya waa on Anastasia iyo Anastasia kaliya.
Dareenka Tani waa mid aad u sarkhaamayo in haween badan gaar ahaan waqtiga xaadirka ah bulshada ayaa sheegay in ay caadi tahay in ragga si ay u siiyaan xiiso caddayn in qof dumar ah. Marka aad taariikhda dareenka buuxda ku reebtay mashquusho iyo siinta xiriirka indhaha buuxa kaa caawin doona in ay qoto dheerayn xiriir iyo show in aad tahay si dhab ah in la joogo.
Dulucda sheekada #2: Degani iyo ujeedada
Had iyo jeer in ay gacanta naftiisa, Christian go'aansado inuu maal waqti iyo dadaal galay horumarinta tiro balaadhan oo ah awoodaha iyo xirfadaha. Waxa uu sidoo kale si joogto ah eegayaa siyaabaha in ay ka hortagaan oo isaga laftiisa la hagaajiyo sida qof, sida Anastasia sameeyo markay dhameystiray, wareysigii ay siisay Christian aan loo eegin sida adag u ahaa.
Inkasta oo ay u ekaan kartaa wax aan macquul aheyn, waxaa jira rag iyo dumar ka soo jiraan kuwa Liibaanay, caaqil, iyo jir ahaan iyo dareen ahaan taam. By ku nool nolol ujeedo marayo koritaanka maalin kasta iyo caqabado, waxaad noqon kartaa is fiican taasoo keeni doonta in si ula kac ah jiidanaya lammaane la mid ah.
Dulucda sheekada #3: Rabitaanka inay u nuglaadaan
Nolo buuxsamay xadgudub iyo trauma qolka Christian in la qaato wax kasta oo gacmihiisa galay oo diirada guulaysato. Inkasta oo uu u muuqda mid xiran marka hore, Christian dabeecadda noqdo endearing sidii uu si tartiib ah u ogolaanaysaa Anastasia uu adduunka shucuurta galay iyo ogolaanaysaa iyada bogsiinayaa.
Anastasia, halka ka buuxsamay dembi laawe iyo is-miyir, go'aansato in ay dhab ahaantii ma doonayo Christian. Oo intii uu adduunka oo gebi ahaanba aan la garanayn oo cusub iyada, ayay isaga iyo hab nololeed oo misna.
Sababtoo ah ee bulshada iyo fikradda ah in muujinaysa dareenka macnaheedu waa daciifnimo, waxaa sina si aan u muujiyo. Laakiin xaqiiqadu, oo muujinaysa dareenka run ahaantii waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag in ay sameeyaan. Iyo kireynta qof kale oo aad si dhab ah oo ku saabsan iyo kalsoonida arki dareenka kuwaas oo u ogolaanaya ixtiraamka iyo xiriirka qota dheeraynaya.
Dulucda sheekada #4: Gaaray
Christian garan maayo cid uu yahay iyo waxa uu rabo ka mid ah nolosha ilaa nool si heer sare iyo sababtoo ah waxa uu si dhab ah isaga qudhiisu waa ogyahay. Marka uu go'aansado inuu doonayo Anastasia, waxaa dhab ahaan ka dhigan tahay wax.
Sameynta go'aamo adag, shido oo muujinaya, taasoo keentay taariikhaha aad u dheer in si firfircoon xidhiidhka adiga iyo saygaada ka caawisaa in ay abuurto niyad xoog. Waa ay fiican tahay in la ogaado in aad keliya doonayay oo la doonayo.
Dulucda sheekada #5: Jacaylka, Jacayl, iyo rabitaanka galmada Unapologetic
Saadaalin waa dhimashada in rabitaanka galmada. Marka Christian aan xiiirka, daadanayay, ama xirashada Anastasia up, uu haysta, qooqaya, iyo iyada dhunkashada. Christian waa xoog, jilicsan, mintid, iyo macaan oo dhan halka unapologetically dalablaan Anastasia. Iyo markeeda, Anastasia barto in uu jecel oo jamasho uu dareenka iyo baahida loo qabo in la tirin karin iyada.
Galmada sahaminta iyo tijaabinayaan caawin doonaa qoto dheerayn xiriir. Wuxuu jecel yahay, ammaanayaa, oo doonaya in la sameeyo lamaanahaaga bandhigyada ku faraxsanahay oo kaliya inta aad daryeesho. Waxaa fure u ah si ay u muujiyaan in aad tahay saaxiib wanaagsan sababtoo ah in aad doonayso in aad noqoto.
Barashada Waxaa ka Konton hooska Grey kaa caawin doona inaad si loo soo jiito lamaanahaaga riyo ama qoto dheerayn xiriir hore u sii xoogaysanaya.
Dating Gabadh yar ee 5 Talaabooyinka Easy